Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Sabti Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub | Dhexnimo Media
Home Ciyaaro Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Sabti Ah Ay...
Manchester United ayaa ka fiirsanaysa inay si rasmi ah u joojiso doonistii Jadon Sancho oo ah 20 jir u ciyaara Borussia Dortmund oo marba kooxdiisu ay xaaladda heshiiskiisa sii adkaynayso. (Star)
Liverpool waxay bilowday qorshe ay kula soo saxeexanayso weeraryahanka reer Senegal ee Ismaila Sarr oo 22 jir ah, waxaanay doonaysaa inay lasoo wareegto bisha January ee sannadka dambe. (Football Insider)
West Ham ayaa wada-hadallo la yeelan doonta 28 jirka reer England ee Jack Wilshere, waxaanay doonayaan inay burburiyaan heshiiska ay kula jiraan oo toddobaadkii uu ku qaato £100,000 Gini. (Mirror)
Barcelona waxay amaah ku doonaysaa difaaca midig ee Arsenal ee Hector Bellerin oo ah 25 jir u dhashay waddanka Spain. (Marca)
Goolhayaha kooxda Rennes ee Edouard Mendy oo 29 jir ah, ayaa tijaabada caafimaadka u mari doona Chelsea usbuucan, kaddib markii ay heshiis wada gaadheen Blues. (Star)
Weeraryahanka Chelsea iyo xulka qaranka France ee Olivier Giroud oo 33 jir ah, waxa uu la yaabay wararka suuqa ku jira ee sheegaya inuu tegayo Juventus. (Telefoot)
Blues waxa kale oo ay ka fiirsanaysaa inay amaah ku dirto garabkeeda weerarka reer England ee Callum Hudson-Odoi oo 19 jir ah. (90min)
Tababaraha West Ham ee David Moyes lama kulmi doono qiimaha ay Burnley ku xidhay difaaca reer England ee James Takowski oo 27 jir ah. (Football London)
Tottenham Hotspur lama filayo inay lasoo saxeexato weeraryahanka Napoli iyo xulka qaranka Poland ee Arkadiusz Milik oo 26 jir ah inta uu furan yahay suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan. (Sky Sports)
Tababaraha kooxda Crystal Palace ee Roy Hodgson ayaa sheegay inay layaab ku noqotay in aanay jirin koox illaa hadda albaabka usoo garaacday oo dalab rasmi ah kasoo gudbisay weeraryahanika reer Ivory Coast ee Wilfried Zaha oo 27 jir ah. (Standard)
West Brom ayaa wada-hadallo heer wanaagsan maraya kula jirta weeraryahanka reer England ee Troy Dooney oo ah 32 jir u ciyaara Watford. (Football Insider)
Kubbad-sameeyaha Manchester City ee Kevin de Bruyne oo 29 jir ah, waxa uu sheegay in aanay murugo ku haynin in kooxdiisu ku guul-darraysatay inay lasoo saxeexato xiddiga Barcelona ee Lionel Messi oo 33 jir ah, waxaanu taageero u muujiyey Phil Foren oo 20 jir ah oo uu tilmaamay inuu is muujin doono. (Mail)
Brighton ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro goolhayaha Arsenal ee Emiliano Martinez oo u dhashay Argentina. Aston Villa ayaa la filayaa in 28 jirkani uu u wareego xagaagan. (Guardian)
Difaaca reer Switzerland ee Gaetano Berardi oo 32 jir ah ayaa rajaynaya inuu heshiis cusub u saxeexi doono kooxdiisa Leeds United bishan gudaheeda. Berardi ayuu heshiiskiisii hore soo gabogaboobay dhamaadka xilki ciyaareedkii hore, waxaanu waqtigan ku maqan yahay dhaawac. (RSI)
Tottenham ayaa loo sheegay in weeraryahanka reer Zambia ee u ciyaara kooxda Red Bull Salzburg ee Patson Daka oo 21 ji ah, uu lasii joogi doono kooxda reer Austria. (Standard)
Arsenal ayaa wada-hadallo la bilowday Brentford oo ay ka doonayso goolhayaha reer Spain ee David Raya oo 24 jir ah. (90min)
Bournemouth waxay u ogolaan doontaa weeraryahanka reer Norway ee Joshua King oo 28 jir ah, inuu iskaga tago kooxda. (Telegraph)
Manchester United ayaa heshiis la gaadhay 17 jirka Manchester Ciyt afka hore uga ciyaari jiray ee Charlie McNeill oo ay kula soo wareegayso lacag dhan £750,000 Gini. (MEN)
Previous articleDowlada Federalka oo ka digtey fatahaado cusub ee wabiga Shabelle
Next articleSanadkii Karoonaha 2020